एग्रो बजारले नेपालमा विरलै पाइने जापानीज नासपातीको बजारीकरण गर्दै। – Agrow Partners
Home Agrow Bazar एग्रो बजारले नेपालमा विरलै पाइने जापानीज नासपातीको बजारीकरण गर्दै।
एग्रो बजारले नेपालमा विरलै पाइने जापानीज नासपातीको बजारीकरण गर्दै।
updated on December 13, 2020 December 3, 2020 by AgrowPartnersLeaveaComment on एग्रो बजारले नेपालमा विरलै पाइने जापानीज नासपातीको बजारीकरण गर्दै।
जापानीज नासपाती नेपालमा २५ बर्ष अगाडि उपत्यका आसपासका बिभिन्न ठाउँमा खेती सूरु भएको हो। हाल यसको खेती भक्तपुरको खरीपाटी र काभ्रेको बनेपामा गरी कुल उत्पादन २५०० – ३००० के.जी. मात्र छ। नेपालमा विरलै पाइने यो फल देख्दा नेपाली नासपाती जस्तै देखिने भए पनि खादा एकदम नरम र गुलियो हुनेगर्दछ।
जापानीज नासपाती नेपालमा २५ बर्ष अगाडि उपत्यका आसपासका बिभिन्न ठाउँमा खेती सूरु भएको हो। यस फललाई अत्यंतै स्याहर चाहिने भएकाले यो फलको खेती अरु फल भन्दा झंझटीलो हुन्छ। प्रत्येक बर्ष हांगाबिंगा काट्नुपर्ने, फल लाग्दा देखी नै प्रत्येक फललाई घाम, पानी र किरा फटयांगरा बाट जोगाउनलाई पत्रिकाको झोला बनाई प्रत्येक फलमा लगाउन पर्ने भएकाले र पुरै बगैचालाई नै जालीले ढाक्नु पर्ने हुन्छ।
हाल यसको खेती भक्तपुरको खरीपाटी र काभरेको बनेपामा गरी कुल २५००-३००० के.जी. मात्र छ। यस हिसाबले यो नेपालको विरलै पाइने फलहरुमा पर्दछ। देख्दा नेपाली नासपाती जस्तै देखिने यो फल खादा एकदम नरम र गुलियो हुनेगर्दछ। हाल बजारमा यस फलको बजारीकरण एग्रो बजारले गरीरहेको छ। यो फल अहिले नक्साल, बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गोंगबु, सामाखुसी र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा उपलब्ध छ।
प्रत्येक बर्ष हांगाबिंगा काट्नुपर्ने, फल लाग्दा देखी नै प्रत्येक फललाई घाम, पानी र किरा फटयांगरा बाट जोगाउनलाई पत्रिकाको झोला बनाई प्रत्येक फलमा लगाउन पर्ने भएकाले र पुरै बगैचालाई नै जालीले ढाक्नु पर्ने हुन्छ। नेपालमा विरलै पाइने यो फल देख्दा नेपाली नासपाती जस्तै देखिने भए पनि खादा एकदम नरम र गुलियो हुनेगर्दछ।
यो फल अहिले नक्साल, बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, गोंगबु, सामाखुसी र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा उपलब्ध छ।हाल बजारमा यस फलको बजारीकरण एग्रो बजारले गरीरहेको छ।